घर नजिकै तथा घर वरिपरिको जग्गालाई करेसाबारी भनिन्छ। हामी करेसाबारीमा आफूलाई मन पर्ने तरकारी, फलफूल तथा फूलबिरुवा लगाउने गर्दछौँ।
करेसाबारीमा बोटबिरुवा लगाउनु भन्दा पहिला निम्न काम गर्नु आवश्यक हुन्छ:-
बारीमा बिउ छर्नु अघि, खन्ने औजार जस्तै कुटो, खुर्पी, कोदालो आदिले बारी राम्ररी खनी माटो मसिनो पार्नु पर्दछ र माटो उठाई बिउ छर्ने ड्याङ बनाउनु पर्दछ। बिउ बाक्लो पारेर छर्नु हुदैन। बिऊ र बिरुवाको आकार हेरी तिन देखि छ इन्चको फरकमा ड्याङमा साना खोबिल्टा पारि हरेक खोबिल्टामा एक-दुइ वटा बिउ हाल्नु पर्दछ। र वरिपरिको माटोले आधा इन्च जति छोप्नु पर्दछ।
बिउ बाक्लो भयो भने बिरुवा मसिना र अग्ला हुन्छन् र बिरुवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुदैन।
बिउ उम्रिन माटो, पानी र हावाको आवश्यकता पर्दछ। माटो भित्र हावा आफैं छिर्न सक्छ तर माटो ओसिलो तथा चिसो छैन भने हजारी तथा पाइपको प्रयोग गरि हामी आफैंले पानी हाल्नु पर्दछ। माटो र बिउमा दख्खल नपर्ने गरि बिस्तार पानी हाल्नु पर्दछ र बिउ नउम्रिउनजेल माटो चिसो पारी राख्नु पर्दछ तर माटो हिलो पर्नु भने हुदैन। बिउ रोपेको तिन दिन पछि उम्रियो कि भनेर हरेक दिन हेर्दै गर्नु पर्छ। धेरै जसो बिउहरु छरेको एक हप्तामा उम्रिन्छन्। यतिन्जेल तिमीले पर्खिनु पर्छ र यो पर्खिनु पर्ने समयमा बिउ उम्रिए पछि के गर्ने भन्ने जानकारी लिदै गर्न पनि सक्छौ। तिम्रो बुवा, आमा र ठूला भएका दाजु, दिदीलाई यसबारे पक्कै थाहा छ होला वहाँहरुलाई सोधेर तथा बोटबिरुवा हुर्काउने बारेका किताबहरू पढेर पनि यस बारेमा थाहापाउन सक्छौ।
केही दिन पछि साना बिरुवा आफ्नो टाउको माथिको माटो उचाली बाहिर निस्कन्छन्। यि साना बिरुवाहरु अति नाजुक हुन्छन् र तिमीलाई जस्तै यिनीहरुलाई पनि राम्रो हेरबिचारको आवश्यकता पर्दछ। यिनलाई चरा, किरा तथा घर पालुवा जनावरले सजिलै नोक्सान पुर्याउन सक्छन्। तसर्थ अब तिनलाई संरक्षण दिने तिम्रो काम हो।
साना साना बिरुवा बिस्तारै बढ्दै जान्छन्। बिरुवा संगसंगै झार पनि उम्रिने गर्दछ। झारले बोटबिरुवाका लागि हालिएको पानी र मल खोसेर लिइ आफू चाँडै हुर्किन्छन् र तिमीले रोपेका बोटबिरुवाहरुलाई हुर्कन दिदैनन्। तसर्थ बिरुवाका वरीपरि झार देख्ने बित्तिकै ओखल्नु पर्दछ। राम्ररी स्याहार गरिएका बोटबिरुवा स्वाथ्य किसिमले छिटो छिटो हुर्कन्छन। बिरुवा पूर्णरुपमा हुर्के पछि तिनमा कोपिला लाग्न र फूल फूल्न थाल्छ।
तिमीलाई थाहा छ फूल फूल्नुको मतलब के हो?
बोटबिरुवामा फूल फूल्नुको मतलब बिरुवा जवान र प्रजनन् योग्य भएको हो। करेसाबारीका बोटबिरुवामा फूल फूल्न थाले पछि तिमीले धेरै पाहुना र साथीहरु पनि पाउँछौ।
पुतली, भमरा, मौरी, चरा आदि तिम्रो बारीका पाहुना हुन्, तिमी तिनीहरुसंग खेल्न पनि सक्छौ।
तिमीलाई थाहा छ ति पाहुनाहरु किन आएका?
तिम्रो बारीमा उनीहरुलाई मनपर्ने खाना छ, उनीहरु त्यही खाना चोर्न आएका हुन्। तर तिमी नडराऊ तिनले तिमीलाई हानी होइन बरु मद्दत गर्दछन्।
उनीहरुको मन पर्ने खाना फूलको रस हो। उनीहरु फूलको रस चुस्न एक फूलबाट अर्को फूल चहार्दा तिनले फूलमा पराग-सेचन गराउँछन्। फूलमा पराग-सेचन भए पछि बोटमा चिचिला लाग्दछ। तिनै चिचिला बढ्दै गए पछि तिमीले त्यसलाई तरकारी तथा फलपुफूलको रुपमा उपयोग गर्छौ।
तरकारी तथा फलफूल फल्न त थाल्यो तर तिम्रो काम अझै सिद्धेको छैन। फलेको फल बिरुवाले थेग्न नसक्ने छ भने त्यसलाई टेको हाल्नु पर्छ। लहरा जाने बिरुवा हो भने बलियो थाङग्रो शुरुदेखि नै हाल्नु पर्छ।
तरकारी तथा फलफूल फल्न थाले पछि केही चार-पाँच दिनमै खानेबेला हुन्छ भने केहीलाई बढ़न लामो समय लाग्छ। धेरै जसो तरकारी तथा फलफूल कलिलैमा खाँदा मिठा र पोशिला हुन्छन्। काक्रो, फर्सी, सिमी, बोडी, लौका, घिरौंला, बन्दा, कोबी, ब्रोकाउली आदि तरकारीहरु कलिलैमा खाँदा स्वादिला र पोसिला हुन्छन् हुन्छन् भने केही तरकारी तथा फलफूलहरु जस्तै तरुल, दाना सिमी तथा बोडी, गाँजर, खरभूजा, कुभिन्डो, स्टूबरी, अंगुर, केरा आदि छिप्पिए पछि मिठा र पोशिला हुन्छन्।
कलिलैमा खाँदा मिठा र पोशिला हुने तरकारीहरु
छिप्पिए पछि खाँदा मिठा र पोशिला हुने तरकारी तरकारी तथा फलफूलहरु